warkii.com » Shah Rukh Khan Oo Loo Diiday Hubkiisa Inuu Xaflad La Galo, Sanjay Dutt Iyo Akshay Kumar-na Waxuu Ku Tilmaamay Dambiile Iyo Kabalyeeri Sheeko Xiiso Leh!!
Shah Rukh Khan Oo Loo Diiday Hubkiisa Inuu Xaflad La Galo, Sanjay Dutt Iyo Akshay Kumar-na Waxuu Ku Tilmaamay Dambiile Iyo Kabalyeeri Sheeko Xiiso Leh!!
Bollywood King Khan Aka Shah Rukh Khan dhacdooyinkiisa hore ee nolosha marka dib loo baaro waxyaabo cajiib ah oo kaa yaabinaayo ayaad ka ogaaneysa xidigaan haduu xanaaqo waxba ma reeban jirin.
Sanadkii 1997 waxaa xaflad dhigtay qarash gareeye Firoz Nadiadwala si uu daah fur ugu sameeyo mashruuciisa Raftaar ee uu hogaamiye kaga dhigtay Sanjay Dutt iyo Akshay Kumar xafladan Mumbai lagu dhigay waxaa kasoo qeyb galeen xidigo badan sida Sanjay, Akshay, Juhi Chawla, Manisha Koirala iyo kuwa kale oo badan.
SRK martidii lagu casuumay sanadii 1997 xafladan ayuu kamid ahaa markuu yimid xaflada waa la baaray oo ammaan adag ayaa loo sameeyay si dadka hub iyo wixii lamid ah aysan ula imaanin goobta.
SRK waxuu watay Biskoolo uu naftiisa ku ilaalinaayo waardiyaashii goobta ayaa u diideen inuu xaflada hubla la galo waliba waxay ku qabsadeen inusan sharci u heysan hubka uu wato mudo 1 saac ayaa la iskadaba jiitamaayey halahaasna SRK waxuu lahaa hala iigu yeero Firoz Nadiadwala oo asna mashquul weyn dhexda kaga jiray sheekadan banaanka ka dhaceysayna war ka heenin.
Waxaa la sheegay inuu SRK xanaaqay uuna yiri,”maxuu isku maleeyaa Firoz waaba ninka xafladan weyn u dhigay filim ay hogaamiyaal ka yihiin Dambiile (Sanjay Dutt) iyo Kabalyeeri (Akshay Kumar) waan ka xumahay inaan xafladan imaado.”
Ciidankii Ammaanka qaabilsanaa ayuu ku jeestay hadana waxuuna ku yiri,”aniga ima taqaanan miyaa waxaan ahay Shah Rukh Khan” mid kamid ah ahaa soo booday oo yiri,”hadaad tahayna maxaa naga galay hub sharci la’aan ayaa sidataa adigoo magacaada ku faanaya.”
Waxaa la sheegay SRK inuu warqadaha sharcigiiss uu ku cadeynaayo hubka uu sitay uu gaariga hoos yaalo ka doontay waliba isaga naftiisa wax waaridyo ah ma wadan xitaa darawal ma wadan kaligiis ayaa yimid isagoo gaari wata.”
Dhacdadan Shah Rukh Khan wariye ayaa wareystay maalmo kadib mar uu duubayey filimkiisa Duplicate waxuuna SRK sheegay in warkaas laga gudbiyay been abuur yahay waxuu yiri isagoo hadlaayo.”
“Maxay tahay sababta aan u caaynaayoAkshay iyo Sanjay waxayba kamid yihiin saaxiibadeyda qaaska ah ee shirkadan iyaga Jackie Shroff iyo Salman Khan ayaa iigu dhow waqtigaan.”
“Mida kale buuqaas habeenkaas dhacay la iskuma heesan hub sharci daro ayaa wadatay ee mid kamid ah ciidamada ammaanka ayaa isku dhacnay sababto ah aniga hadii aan hubka meesha ku reebaayo waxaa sharci ah i warqad aqoonsi ah ama kaar uu isiiyo kaasi oo cadeynaayo in hubkeyga meesha ku reebah hadhowna si fudud dib ugu helo.”
“Wuu diiday inui isiiyo ana waan diiday inaan hubkeyga dhiibo xafladana galo ileen hada sidaa sameyo hubkeygana lala tago hadhow maxaa cadeen ii ah inaan hu meesha dhigtay buuqa halkaas ayuu ka dhashtay waxa kale la sheegay waa been abuur.”